Fariinta ay dirayso shaxda Muuse ee golahiisa wasiiradu. - somalilandlivemedia
Fariinta ay dirayso shaxda Muuse ee golahiisa wasiiradu.
16:29 14. December 2017
Waa markii koowaad ee labadan mudane xil umada Somaliland u qabtaan tan iyo sagaashaamaadkii, labadan mudane oo labaduba siyaabo kala duwan loogu eedeeyo musiibadii qaran ee dagaaladii sokeeye.
Kaahin waa wasiirkii gaashaandhiga ee xukuumadii Cabdiraxmaan Tuur ale ha u naxariistee waana wasiirkii ugu horeeyey ee iska casila xukuumadii Tuur halkaas oo uu gaar ula baxay waagaa dhamaan wasiiradii beeshiisa ka soo jeeday, finadii maalintaa bilaabantayna waatii Somaliland oo dhami ku kala guurtay ee ay ku kala dhinteen kumaanaan iyo kumanaan aan waxba galabsan.
Muuse wuxuu ahaa wasiirkii arimaha gudaha ee xukuumadii Cigaal intii uu xilka ahayeyna wixii dhacay dhamaan waynu kawada dharagsanahay manaha ah eedahani kuwo lagu xanto ee waa kuwo badheedh loogu eedeeyey kaftan iyo si cadba.Tan iyo waagaa waxay madaxdii dalka soo maray ka ilaalin jireen figta sare ee xukunka siyaabo kala duwan iyadoo ujeedadu ahayd si loo ilaabo nabaradii ay dadka kala gaadhsiiyeen labadan nin.
Tani waa aduunyo waa waa sareeye hooseeye meel aar ka kacay atoor fadhfadhiisaye waxaa maanta taladii dalka ee ugu sareysay ku fadhiya ninkii cid walbaaba ka dayrisay hanaankiisa maamul waana xaqiiqo ay tahay inaynu dhamaan wada aqbalno waxaanu maanta ku dhawaaqay golahiisii wasiirada ee dhawaanba laga dhur sugaayey waxaanaynu qormadan si kooban u dul istaagi doonaa fariimaha kala duwan ee ay xambaarasantahay magacaabistan dhanka kararan ee golahiisa wasiirada. Waxa kale oo aynu eegi doonnaa sababta kuwo badan oo aad loo filanaayey meesha uga baxeen.
Kuwa la filanaayey ee aan ku jirin xukumadan.
Waxaa ilaa shalay baraha bulshadu wararka isku waydaarsato lagu hadal hayey ka muuqasho la´aantii xafladii caleemo saarka Muuse niman badan oo aqoonyahano ahaa oo la filanaayey inay xukuumadan ku jiraan sida Pro.Samater, Jamaal, iyo Bile kuwaas oo dhamaantood aan ku jiran golahan. Hadaba ujeedadu maxay tahay ma khilaaf baa soo kala galay ? waa sida dad badani tibaaxayaan waxaa kale oo jirta inay dhici karto qorshe ah weli wax dhici doonaa lama garan karo Muuse ma ku kicidoonaan beesha ugu mucaaradada badan ee Garxajis mise siyaasad kale ayey isku fahmi doonaan? Sidaa darteed qoladan qurbaha ka soo hangagaaraw isuga inta wax dhan u dhacayaan ee wasiirada tijaabada ka soo baxayaan miyaa ujeedada Muuse ?
Taas micnaheeda oo ah inuu qorshe jiro kaas oo laaca hore uu yahay yool baadh waana badi aragtida istiraatiijiyada milaterigu dhigayso in ciidanka ka hor sahan iyo yoolbaadh la diro waxaanay wasiiradani yihiin dhaman kuwo ujeedooyin kala duwan loo magaacabay midwalbana ujeedo gaara oo xeel dheer laga leeyahay waxaanaynu yara dul istaagi kuwa ugu muhiimsan iyo ujeedooyinka Muuse ka leeyahay, Sida durtaba cad wasiiradii ugu muhiimsanaa badi wuxuu Muuse ku taxay waxa loogu yeedho Jeegaanta.
Wasiirka arimaha guduhu waa xubinta ugu muhiimsan uguna xasaasin marka la eego xaalada dalku sugan yahay, badi taariikhdeeda ugu badan waxaa wasaaradan loo dhiibi jira beesha Garxajis gaar ahaan Habaryoonis iyadoo ujeedadu iska cadayd qofkastaana garanaayo. Magacaabista wasaarada arimaha guduhu waxa ku xidhan nabada iyo xasiloonida dalka guud ahaan waxay suaashu tahay hadiiba beesha ugu badan ee mucaaridka ahi ay tahay Garxajis wasiirka arimaha gudaha ee la magaabayna uu yahay shakhsi halka beesha mucaaridka ahi ka taagantaha Muuse ay ka taagantahay isna ma ka dhalan karaa xal ?
Ujeedada ka danbaysaa waxay inala tahay inaanay meeshaas xal ka soo jeedin waana dagaal cad oo Muuse iclaamiyey, iyadoo Mucaaridku hore wax u tabanayeen iyadoo doorashadani tahay mid dadkii sii kala dishay oo waxa loogu yeedhay Jeegaani ku dhalatay himiladii isku duubnidii Somaliland ma gaagixindoontaa Somaliland jeegaantan ku dhalatay sida ay jeegaantuba u gaagixiso daruurta cukan markay ku dhalato.
Hadal iyo dhamaan waxay inala tahay inuu qorshahani yahay mid badheedha ujeedaduna tahay dhafoor taabad waayo hadii uu xal diyaar u yahay malaa iyaguu u magacaabi lahaa ama cid kale oo aanay xasaasiyad ka sii qabin se sidani waa daahir yaa shamis balse waxaa la sugaaba waa shirka ay iyaguna ku baaqeen inay beeshaa balaadhani iskugu imanayso iyo goaamada ka soo baxa halkaas.
Wasiirka isgaadhsiinta iyo tijnolojiyada
Wuxuu wasiirkani ka soo jeedaa isla beesha Muuse waxaanay wasaaradani tahay mid si gaara mudan inaynu markeeda u dul istaagno insha alaah se si kooban ujeedada ka danbaysaa waxay tahay iyadoo qorshahii ina awsiciid la hir galinaayo shirkada isgaadhsiinta ee (somcable) cida halkaa loo dhiibaayo horeba way iskaga cadayd inuu noqonaayo nin reerkaas uun ah.
Wasaaradan oo ah iyaduna mid aad umuhiim ah inkastoo aynaan wax xidhiidha oo la aqoonsan yahay aynaan dunida la lahayn hadana si kastooy u dhacdo waa isha qudhee ee uu nidaamka dalka ka taliyaa dunida kula xidhiidhaayo qofka halkaa uu Muuse gaysanaayaana waa inay ahaataa cid ka soo jeeda dhankiisa ama xidhiidh qoto dheeri ka dhaxeeyo, Waxa kale oo wasiir Shire ogyahay wax badan intii uu xilka hayey sidaas darteed maadaama ay tahay wasaarad muhiima waxay u eegtahay in uu sii haysanaayo inta wax kala degayaan.
Ujeedada ugu wayn ee wasiirkii maaliyada uu usiiyey mudane ka soo jeeda beesha balaadhan ee mucaaradka u badan ee Garxajis waxay tahay sidii uu ukala jabiyo beesha oo uu u yidhaa Cidagalow maxaad rabtaan wasaaradii ugu muhiimsanayd baan idin siiyee. Ma garan karno ilaa inta ay shaxdani socon doonto se siday u muuqataa waa sidaas kuwa kale ee u jeedaana waa kuwo ujeedooyin waraabe u taaga laga leeyahay. Maanta uunbay si rasmiya u bilaabantay ciyaartii u dhaxaysay kooxda muuse iyo bulshada reer Somaliland ale kama dhigo se waxaa hor yaala Muuse caqabado waa wayn oo hadii aanu si xirfadaysan uga dabaalan inagu celinkara halkii sagaashamaadkii.
Halkan Ka Daawo Wasiir Cabdilaahi Abokor Oo Sheegay In Aan Golaha Wakiiladu Joojin Karrin Tacriifada Bilaydh Lambarka Gaadiidka
Musharax Ciro Oo Khudbad Uu U Jeediyey Jamaahiirta Waddani Ee Burco, Diirada Ku Saaray Cali Mareexaanka Suuqa Baloodhaystay Iyo Balanqaadyada Fashilmay Ee Kulmiye
Halkan Ka Daawo Xukuumadda Madaxweyne Biixi Oo Ruqsado Kala Noqotay Shirkaddo Ka Shaqeeya Isgaadhsiinta
War Deg-Deg Ah Koomishanka Doorashooyinka Somaliland oo ka hadlay hada qaabka Tirinta codadku noqonayso
Muuse Iyo Saylici oo ku Shax-guuray Boorama Iyo Nuxurka Safarkooda Beri
Newer PostMudaharaado lagaga soo horjeedo dilka xukuumadda Kulmiye ugeysatay dhalin yaradii aan dembiga lahayn
Older Post Inta la og yahay illaa 17 askar boolis ah ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho, sida uu bartiisa Facebook ku qoray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Yusuf Garaad.